तपाईले युरेनस ग्रहको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामीले अघिल्लो लेखमा हेर्‍यौं, हाम्रो सौर्य प्रणाली plane ग्रह र प्लायनोइड बाट बनेको छ प्लूटो यसको आकारको कारणले गर्दा यसलाई एक मान्न बन्द भयो। हामीले गहिराईमा विश्लेषण गरिसकेका छौं बुध, भेनस, मार्टे, बृहस्पति y स्याटर्न, त्यसैले हामी कुरा गर्न सक्छौं ग्रह युरेनस। यो एक विशेषता ब्लू डट को रूप मा परिचित छ र यस पोष्टमा तपाईं यसको बारेमा सबै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ।
के तपाई युरेनस ग्रहको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ? यसका सबै रहस्यहरू पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।
1 यूरेनस को विशेषताहरु
3 यूरेनस संरचना
यूरेनस को विशेषताहरु
यो सूर्यको निकटता अनुसार हाम्रो सौर्यमण्डलको सातौं ग्रह मानिन्छ। निकटतम बुध हो, जबकि सबैभन्दा पछि नेप्च्यून हो। यसका साथै हामी यो देख्न सक्छौं कि विशाल आकारको विशाल ग्रहहरू (जसलाई ग्यास जइन्ट्स भनिन्छ), यूरेनस तेस्रो स्थानमा छ।
यसको व्यास 51.118१,१20 किलोमिटर छ र यो सूर्यको सम्बन्धमा हाम्रो ग्रहको भन्दा २० गुणा ठूलो दूरीमा अवस्थित छ। यसको नाम युरेनस भन्ने ग्रीक देवताको सम्मानमा दिइएको थियो। अन्य अस्थिर संरचनाहरू भएका अन्य चट्टानका ग्रहहरू वा ग्रहहरूको विपरीत, यूरेनससँग एकदम समान र समान सतह छ। निलो रंग हरियो परिणत हुनु सूर्यको किरणहरूको झुकावको प्रतिबिम्ब होईन। यो ग्यासहरूको संरचना हो जसले यसलाई रंग दिन्छ।
पृथ्वीबाट यसलाई हेर्न सक्षम हुन, रातको आकाश धेरै अँध्यारो हुनुपर्दछ, चन्द्रमासँग नयाँ चरणमा (हेर्नुहोस्) चन्द्रमा को चरणहरु)। यदि यी सर्तहरू पूरा भए, दूरबीनको साथ हामी सजिलैसँग त्यो हरियो निलो थोप्ला भेट्टाउन सक्छौं।
वैज्ञानिक जसले पत्ता लगाए यो ग्रह विलियम हर्शल थिए र उनले त्यसो गरे मार्च १ 13, १1781१। यस समयमा धेरै व्यक्तिहरू हाम्रो आकाशको बारेमा बढि खोजी गर्न र बाह्य अन्तरिक्षमा के पत्ता लगाउन खोजिरहेका थिए। यूरेनस पत्ता लगाउन हर्शेलले एउटा टेलिस्कोप प्रयोग गर्‍यो जुन उनले आफैंले बनाएका थिए। जब उनले आकाशमा हरियो निलो डट पहिचान गरे, उनले रिपोर्ट गरे कि यो एक धूमकेतु हो। तर यो परीक्षण पछि, यो एक ग्रह थियो भनेर थाहा थियो।
यो बृहस्पति पछि सौर प्रणाली मा ग्रहहरु को सूची मा छैठौं स्थान छ। यसको कक्षा एकदम ठूलो छ र यसलाई यात्रा गर्न यसले 84 84 वर्ष जति लिन सक्दछ पृथ्वीमा भन्दा। त्यो हो, जबकि हाम्रो ग्रहले सूर्यलाई circ times पटक चक्कर लगाएको छ, यूरेनसले मात्र एउटा बनाएको छ।
यो हाम्रो ग्रहको आकार भन्दा चार गुणा छ र यसको घनत्व १ घन सेंटीमिटर मात्र १.२ me ग्राम छ। यसको आन्तरिक संरचनामा हामी विभिन्न प्रकारका चट्टान र बरफ सामग्री पाउँछौं। चट्टानी कोर धेरै प्रशस्त छ र यसको वातावरणमा सबैभन्दा प्रचुर ग्यासहरू हाइड्रोजन र हीलियम हुन्। यी दुई ग्यासहरू सम्पूर्ण ग्रह द्रव्यमानको १%% अंश हुन्।
यसैले यसलाई ग्यास विशाल भनिन्छ। यसको अक्षको झुकाव यसको कक्षाको सन्दर्भमा करीव 90 ० डिग्री हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो ग्रहको २ 23 डिग्री छ। यूरेनसको पनि शनि जस्तो रिंग छ, यस्तै साइज छैन। अक्षको झुकावले रिंगहरू र उनीहरूको उपग्रहहरूलाई पनि असर गर्दछ।
यसको अक्षको यस्तो झुकावका कारण, यूरेनससँग वर्षको दुई सत्रहरू मात्र छन्। Years२ बर्षसम्म सूर्यले यस ग्रहको एउटा ध्रुवलाई प्रकाश पार्छ र अर्को 42२ का लागि अर्को पोललाई। सूर्यबाट धेरै टाढा भएकोले, यसको औसत तापक्रम -११० डिग्री आसपास छ।
यसमा एउटा औंठी प्रणाली छ जुन शनिकोसँग केहि गर्नु हुँदैन र यो पनि कालो कणहरूले बनेको छ (हेर्नुहोस् अँध्यारो पदार्थ के हो?)। विज्ञानमा जस्तै, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अन्वेषणहरू संयोगले हुन्छन् र उत्तमको खोजी गर्दा विपरित हुन्छन्। यी रिings्गहरू १ 19852मा पत्ता लागेका थिए जब भोएजर २ स्पेस प्रोब नेप्च्यून ग्रहमा पुग्दै थिए। यो त हो कि, उसको मृत्युबाट, उसले युरेनसको औंठी देख्न सक्छ।
सब भन्दा आधुनिक र विकसित टेक्नोलोजीको साथ यो जान्न सम्भव भएको छ कि यसको एकवटा नीलो र अर्को रातो छ।
ग्रहमा सामान्य चीजहरू जुन घण्टीहरू हुन् ती हुन् रातो। जहाँसम्म, यो नीलो रिंगहरू फेला पार्दा धेरै भाग्यशाली हुन्छ। यसको वातावरण र भित्री भागमा यो% 85% हाइड्रोजन, १%% हिलियम, र थोरै मीथेन मिलेर बनेको छ। यस कम्पोजिसनले यसमा हरियो निलो रंग राख्छ।
यस ग्रहमा तरल सागर छ, यद्यपि यसको हामीसँग पृथ्वीमा भएको कुनै सम्बन्ध छैन। पहिलेको नामाकरण गरिएको ग्यासहरूले बनेको यसको वातावरण, पानी, अमोनिया र मिथेन ग्यासले सम्पूर्ण बरफलाई नफाल्दासम्म झर्छ र लिक्विफ हुन्छ। हामीले भन्यौं कि सागर पृथ्वीमा कुनै कुरा जस्तो छैन र यो पानी र अमोनियाले बनेको हुनाले हो। यसले उच्च विद्युत विद्युत् चालकता राख्छ र पूरै खतरनाक हुन्छ।
बृहस्पति र शनि जस्ता अन्य ग्यास राक्षसहरूको विपरीत, यूरेनसमा, सूर्यबाट टाढा टाढा हुने गैसहरूमा बरफ बरफ हो। तापक्रम एकदम कम छ र यसले वैज्ञानिक समुदायलाई उनीहरूलाई आइस राइन्टहरू भन्न बोलायो। वैज्ञानिकहरू यसको अक्ष यति झुकाव हुनुको कारण जान्न सकेका छैनन्, यद्यपि यस्तो सोच छ कि यसको गठनको क्रममा यो अर्को प्रोटोप्लानेट वा केही ठूला चट्टानको साथ टकराउन सक्छ र त्यसले ती धुरीलाई प्रहारको रूपमा लिएको छ।
यसमा २ 27 उपग्रहहरू छन् जसमा केहि अरूलाई भन्दा बढि चिनिन्छन्। उपग्रहहरू तिनीहरूको आफ्नै वातावरणको लागि पर्याप्त ठूलो छैन। तिनीहरू भोएजर २ प्रोब द्वारा पनि पत्ता लगाइएका थिए।तनीहरूलाई टायटानिया र ओबेरन भनिएको छ। मिरन्डा भन्ने अर्को अर्को पानी र धुलोको बरफले बनेको छ र सम्पूर्ण सौर्यमण्डलमा सब भन्दा माथि चट्टान छ। यो २० किमी भन्दा बढि उचाई हो। यो हाम्रो ग्रहको ग्रान्ड क्यान्यन भन्दा १० गुणा ठूलो छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, यूरेनस एउटा ग्रह हो जुन कहिले पनि अचम्म मान्दैन र यस बारे अझ धेरै कुरा थाहा हुन्छ। यो सम्भव छ कि टेक्नोलोजीको विकासको साथ हामी यसका सबै रहस्यहरू उदा .्न अधिक र अधिक जान्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » ग्रह यूरेनस